Yakavanzika Policy & Mashandiro Ebasa - Runhare Spy
Yakavanzika Policy & Mashandiro Ebasa
Mari; Payment. By signing up for a Services account you agree to pay Phones Spy the applicable setup fees and recurring fees. Applicable fees will be invoiced starting from the day your services are established and in advance of using such services. Phones Spy reserves the right to change the payment terms and fees upon thirty (30) days prior written notice to you. Services can be canceled by you at anytime on thirty (30) days written notice to Phones Spy.
Phones Spy ("Nhare Spy") inoshanda phonesspy.com uye inogona kushandisa mamwe mawebhusaiti. Iyo iphoni Sisitimu yemutemo kuremekedza zvakavanzika zvako zvine chekuita neruzivo rwatinogona kutora tichishandisa mawebhusaiti edu.
Kufanana nevashandisi vazhinji vewebhusaiti, Nhare Spy dzinounganidza ruzivo rwusiri-rwekuzvizivisa rwemhando iyo mabhurawuza ewebhu nemaseva anowanzoita kuti zviwanikwe, senge rudzi rwebrowser, mutauro unofarira, saiti inoreva, uye zuva uye nguva yechikumbiro cheumwe neumwe mushanyi. Nhare dzeSpy chinangwa chekutora risiri-rinozivisa ruzivo nderokunzwisisa zvirinani mashandisiro anoita maPhones Spy vashanyi webhusaiti. Nguva nenguva, Nhare Spy dzinogona kuburitsa ruzivo rwusiri-rwekuzvisarudzira muhuwandu, semuenzaniso, nekuburitsa mushumo pamusoro pemaitiro mukushandiswa kwewebhusaiti.
Nhare dzeSpy dzinounganidzawo zvingangoita ruzivo rwega seInternet Protocol (IP) kero dzevashandisi vakapinda mukati uye nevashandisi vanosiya zvirevo pa phonesspy.com blogs / saiti. Nhare dzeSpy dzinongoburitsa zvakatemerwa mumushandisi uye anopindura IP kero pasi pemamiriro ezvinhu akafanana ayo yaanoshandisa uye kuburitsa ruzivo rwega-rwekutsanangura sekutsanangurwa pazasi, kunze kwekuti mupomeri IP kero uye email kero zvinoonekwa uye zvinoratidzwa kune manejimendi eiyo blog / saiti uko iyo komenda yakasara.
Vamwe vashanyi kumawebhusaiti emaPhones Spy vanosarudza kudyidzana nePhone Spy munzira dzinoda kuti Nhare dzeSpy dziunganidze ruzivo rwevanhu pachavo. Huwandu uye mhando yeruzivo inounganidzwa nePhones Spy kunoenderana nemhando yekudyidzana. Semuenzaniso, tinobvunza vashanyi vanonyoresa pa phonesspy.com kupa zita rekushandisa uye email kero. Avo vanoita mashandisirwo nePhones Spy vanokumbirwa kuti vape ruzivo rwakawedzerwa, kusanganisira sezviri kudikanwa ruzivo rwemunhu newemari runodiwa kugadzirisa izvo zviitiko. Muzviitiko zvese, Nhare Spy dzinotora ruzivo rwakadai chete sezviri madikanwa kana zvakakodzera kuzadzisa chinangwa chekushanya kwemushanyi neFoni Spy. Nhare dzeSpy hadziburitse ruzivo rwega-kuratidza kunze kwekutsanangurwa pazasi. Uye vashanyi vanogona kugara vachiramba kupa ruzivo rwekuzvizivisa pachavo, pamwe nebakoat iyo inogona kuvatadzisa kuita zvimwe zviitiko zvine chekuita newebhusaiti.
Nhare dzeSpy dzinogona kuunganidza huwandu pamusoro pehunhu hwevashanyi kumawebhusaiti ayo. Nhare Spy dzinogona kuratidza ruzivo urwu pachena kana kuhupa kune vamwe. Nekudaro, Nhare dzeSpy hadziburitse ruzivo rwega-rwekutsanangudza mamwe kunze kwekutsanangurwa pazasi.
Nhare dzeSpy dzinoburitsa ruzivo runogona kuve rwega-ruzivo uye ruzivo rwega-ruzivo kune avo chete vevashandi varo, makondirakiti nemasangano akabatana ayo (i) anoda kuziva ruzivo irworwo kuti arugadzirise parunhare rweSpy akamiririra kana kupa masevhisi anowanikwa kumawebhusaiti emaPhones. , uye (ii) vakabvumirana kusazvizarura kune vamwe. Vamwe veavo vashandi, makondirakiti nemasangano akabatana anogona kunge ari kunze kwenyika yako yekumusha; nekushandisa maPhones mawebhusaiti mawebhusaiti, unobvumidza kuchinjiswa kweruzivo rwakadai kwavari. Nhare Spy haizorende kana kutengesa zvingangoita pachako-kuzivisa uye pachako-kuzivisa ruzivo kune chero munhu. Zvimwe kunze kwevashandi vayo, makondirakiti nemasangano akabatana, sezvakatsanangurwa pamusoro apa, Nhare Spy dzinoburitsa zvingangoita-kuzvizivisa uye nekuzvizivisa pachako ruzivo chete mukupindura samo, dare redare kana chimwe chikumbiro chehurumende, kana apo Nhare Spy dzinotenda mukutenda kwakanaka kuti kuzivisa kunokosha zvine mutsindo kuchengetedza chivakwa kana kodzero dzeMafoni Spy, mapato echitatu kana veruzhinji. Kana iwe uri mushandisi yakanyoreswa yeFoni Spy webhusaiti uye wakapa yako email kero, Nhare Spy dzinogona dzimwe nguva kukutumira iwe email kuti ikuudze iwe nezve maficha matsva, kukumbira mhinduro yako, kana kungo chengetedza iwe kuti uzive nezviri kuitika nePhones Spy uye zvigadzirwa zvedu. Kana iwe ukatitumira isu chikumbiro (semuenzaniso kuburikidza neemail kana neimwe nzira yedu yemhinduro), tinochengetedza kodzero yekuiburitsa kuitira kuti itibatsire kujekesa kana kupindura chikumbiro chako kana kutibatsira kutsigira vamwe vashandisi. Nhare dzeSpy dzinotora matanho ese akakodzera kudzivirira kubva mukuwana mvumo, kushandiswa, shanduko kana kuparadzwa kwemazita angangozvizivisa pachezvako.
Kuki tambo yeruzivo iyo webhusaiti inochengetera pakombuta yemushanyi, uye kuti bhurawuza remushanyi rinopa kune webhusaiti iyo nguva yega yega mushanyi paanodzoka. Nhare Spy dzinoshandisa makuki kubatsira Phones Spy kuziva uye kuteedzera vashanyi, mashandisiro avo ePhone Spy webhusaiti, uye yavo webhusaiti kuwana zvavanofarira. Nhare dzeSpy vashanyi vasingade kuti makuki aiswe pamakomputa avo vanofanirwa kumisikidza mabhurawuza avo kuramba macookie vasati vashandisa mawebhusaiti emaPhones Spy, zvine mhedzisiro yekuti zvimwe zvinhu zvemawebhusaiti emaPhones Spy zvinogona kusashanda nemazvo pasina rubatsiro rwemakuki.
Kana Nhare Dzakaongorora, kana zvimwe zvese zvadzo, zvikawanikwa, kana mune zvisingaitike kuti Nhare Spy dzinobuda mubhizimusi kana kupinda mukubhuroka, ruzivo rwevashandisi rwunove imwe yemidziyo inotamiswa kana kuwanikwa nechetatu. Unobvuma kuti shanduko dzakadai dzinogona kuitika, uye kuti chero munhu anowana maPhones Spy anogona kuramba achishandisa ruzivo rwako pachako sekutaurwa kwazvakaitwa mune ino mutemo.
Ads dzinoonekwa pane chero ewebhusaiti yedu dzinogona kuendeswa kune vashandisi nevashambadziri vadyidzani, vanogona kuseta makuki. Aya makuki anotendera sevha yekushambadza kuti ione komputa yako nguva dzese dzavanokutumira kushambadzira kwepamhepo kuunganidza ruzivo nezve iwe kana vamwe vanoshandisa komputa yako. Ruzivo urwu runobvumira kushambadzira netiweki, pakati pezvimwe zvinhu, kuendesa zvakanangwa kushambadza izvo zvavanotenda kuti zvichave zvinonyanya kukufadza. Iyi Yakavanzika Policy inovhara mashandisirwo emakuki nePhones Spy uye haifukidze kushandiswa kwemakuki nechero vashambadzi.